Azo alaina amin'ny Macs miaraka amin'ny chip M1 | izao ny Photoshop Famoronana an-tserasera
ny Mac miaraka amin'ny chip M1 vaovao dia efa afaka isaina amin'ny Adobe Photoshop rehefa avy nambara dia tsy manao na inona na inona amin'ny Adobe. Ary ny fahafahan'izy ireo manana Photoshop izay mampiasa ny puce vaovao, dia mitarika amin'ny fanatsarana ny fahombiazany.
Ary tsy miresaka fanatsarana zavatra isika fa, 1,5 heny fotsiny raha oharina amin'ity rafitra ity miaraka amin'ireo taranaka teo aloha miaraka amina fanahafana mitovy amin'izany. Tena azo antoka fa ireo manana Mac amin'ny Apple Silicon dia hahafantatra ny fomba lanjan'izy ireo amin'ny fandrefesana ity zava-baovao avy amin'ny Adobe ity.
Anisan'ireo zava-baovao manatsara ny kalitao ireo chips M1 vaovao miaraka amin'ny Adobe Photoshop azontsika ianteherana amin'ny fanatsarana hafainganana amin'ny fifantenana, sivana ary ny fampisehoana amin'ny ambaratonga ankapobeny.
Izany dia milaza izany hatramin'ny andro anio Ny Adobe Photoshop dia mandeha amin'ny Macs amin'ny chip M1 ary manararaotra izany hampitomboana ny zava-bita. Io haingam-pandeha io dia mitarika amin'ny fanatsarana 1,5 heny raha oharina amin'ireo rafitra teo aloha miaraka amina fananganana mitovy amin'izany, ary raha ny hevitr'i Adobe mihitsy, dia nanao fitsapana ny fanokafana sy ny fitehirizana rakitra, ny fanatanterahana ny sivana ary ny fikajiana fikajiana be toy ny lohahevitra mifototra amin'ny Content-Base Fill and Select.
Ireo asa ireo dia mihazakazaka haingana kokoa ary na ny fanombohana aza dia haingana kokoa. Ankoatr'izay dia miara-miasa amin'ny Apple izy ireo hanatsarana ny fahombiazana ao anatin'ireto chips M1 ireto. Ary raha ny tena izy dia misaotra an'ireo mpampiasa tamin'ny alàlan'ny Creative Cloud nandray anjara tamin'ny beta an'ny Photoshop ho an'ireo chips ireo i Adobe ary afaka nanampy izy ireo ankehitriny mba hahafahantsika milaza fa efa zanatany io.
Mazava ho azy, milaza fa misy roa Fitaovana mbola azo hatsaraina: fanasana hanova antontan-taratasy ao anaty rahona, ary fampifanarahana ny preset. Raha mampiasa ireto endri-javatra roa ireto ianao dia mamporisika ny Adobe hiverina amin'ny Photoshop ao amin'ny Rosetta 2 ianao mandra-panavaozana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe Photoshop dia efa eo amin'ny Macs miaraka amin'ny Apple Silicon